अन्तराष्ट्रिय – Page2– PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय (Page 2)
admin November 13, 2021 November 13, 2021 अन्तराष्ट्रिय 0
एजेन्सी । इजरायलले मिसाइल वा गोलीको साटो विद्युतीय किरण (बिम) पठाएर दुश्मनका निशाना ध्वस्त पार्ने नयाँ प्रतिरक्षा प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको नयाँ प्रणालीले विशेष किरण (बिम) को प्रयोग गरी दुश्मनका निशानामाथि हमला गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । नयाँ प्रतिरक्षा प्रणालीलाई नवीन स्क्यानिङ प्रविधिका आधारमा
यस्तो खतरा बन्दैछ लिफ्ट !
admin November 12, 2021 अन्तराष्ट्रिय 0
एजेन्सी । यु'गा'ण्डामा एचआइभीवि'रुद्ध चलिरहेको अभियानमा त्यहाँका युवाहरुले निकै बा'धा सृजना गरिरहेका छन् । एक नयाँ अध्ययनमा भएको खुलासा अनुसार त्यहाँका मोटरसाइकल र ट्याक्सी ड्राइभरहरुको क्रियाकलाप त्यहाँको लागि ख'तरना'क देखिएको छ । यहाँका चालकहरु पैसा लिनुको सट्टा ग्रा’ह’कसँग शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध बनाइरहेका छन् । यो अध्ययन मेकरेरे विश्वविद्यालयको कलेज अफ एजुकेसन
कहालिलाग्दो घटना : आफ्नै बाबुले घर खर्च नै नभएपछि ९ बर्षिया छोरीलाई नै बेचिदिए…
आसिफ खान तुर्क – म पाकिस्तानको पेसावार सहरमा बसेर एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको छु। छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानमा पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमले मानवीय संकटको आभाष दिन्छ। पेसावारबाट अफगानिस्तानको राजधानी काबुल २ सय ८२ किलोमिटर टाढा छ। दुई देशको बीचमा रहेको खैयबार पास पार गरेपछि जलालावाद हुँदै काबुल पुग्न सकिन्छ।
विश्वले हेरेको नोवेल शान्ति पुरस्कार विजता मलाला अन्ततः विवाह बन्धनमा बाधिइन्
admin November 10, 2021 अन्तराष्ट्रिय 0
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजईले बेलायतको बर्मिघम सहरमा विवाह गरेकी छन् । २४ वर्षीया मलालाले असर मलिकसँग विवाह गर्दै आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण दिन भएको बताएकी छन् । पाकिस्तानकी चर्चित महिला अधिकारकर्मीलाई तालिबान चरमपन्थीहरुले सन् २०१२ मा टाउकोमा गोली प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि बर्मिघम सहर सहर
अन्ततः दुवईका सडकमा यसरी गड्ने भए स्वचालित कार..
admin November 9, 2021 अन्तराष्ट्रिय 0
एजेन्सी । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएइ) को मन्त्रिपरिषद्ले सडकमा सेल्फ ड्राइभिङ कारको परीक्षण सुरु गर्न त्यहाको गृह मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयलाई युएईको सडकमा सेल्फ ड्राइभिङ कारको परीक्षणको नतिजाको मस्यौदा तयार गर्ने र यो प्रविधि अपनाएमा स्थायी र अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पेश गर्ने जिम्मा
विदेशी यात्रुहरूलाई अमेरिकाले २० महिनापछि सोमबारबाट आफ्नो सीमा खुला गर्दै…
admin November 9, 2021 अन्तराष्ट्रिय, समाचार 0
वासिङटन । कोरोना भाइरसको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका विदेशी यात्रुहरूलाई अमेरिकाले सोमबारबाट आफ्नो सीमा खुला गर्दैछ । बीस महिना लामो आवागमन प्रतिबन्ध अन्त्य गर्दै अमेरिकामा सोमबारबाट सो निर्णय लागू गर्न लागेको हो । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड १९ का कारण सन् २०२० को मार्च महिनामा उक्त प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
दुःखद विमान दुर्घटनामा गायिकाको निधन, भिडियो भयो भाइरल!
admin November 6, 2021 अन्तराष्ट्रिय 0
रियो द जेनेरियो(अमर उजाला)– ब्राजिलकी लोकप्रिय गायिका मारिलिया मेण्डोंकाको शुक्रबार एक विमान दुर्घटनामा निधन भएको छ । ‘द क्वीन अफ सफरिङ’ नामले परिचित ‘ल्याटिन ग्रामी’ विजेता मारिलिया केवल २६ वर्षको थिइन् । कन्ट्री म्यूजिकको लोकप्रिय युवा स्टारमध्ये एक मारिलिया ब्राजिलमा नै हुने एक सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन गएकी थिइन् । उनको
काठमाडौं – तालिवान शासित अफगानिस्तान आर्थिक सं’कटमा फस्दै जाँदा मुलुकका विभिन्न भागमा प्र तिब न्धित प्र थाले पुनः टाउको उठाउन लागेको छ। परिवारका लागि खर्च जुटाउने नाममा विवाहका लागि बालिका बे'च्ने प्र'था फेरि सुरु भएको पाइएको छ । पछिल्लो महिनामा गरिबी र भोकम'रीसँग जुधिरहेका अफगान परिवारले जीवन धान्नका लागि पैसा
सोफामा म सँग टाँ’सिएर उनले यस्तो गरेपछि…
admin November 2, 2021 अन्तराष्ट्रिय 0
न्युयोर्क – अमेरिकामा डेमोक्रयाटिक पार्टी नेतृ तथा पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनकी एक निकट सहयोगीले अमेरिकाका एक सिनेटरले आफूलाई यौ’ ‘न दु’र्व्यव’हार गरेको खुलासा गरेकी छिन् । हिलारीकी सहयोगी हुमा अबेदिनले एक राजनीतिज्ञले सन् २००० को मध्येतिर आफूलाई घरमा बोलाएर सोफामा यौ’ ‘न दु’व्र्य’बहा’र गरेको बताएकी हुन् । सोफामा आफूसँग टाँ’सिएर सिनेटरले
विश्वको यस्तो देश, जहाँ पहिलोपटक एक जनालाई देखियो संक्रमण, लकडाउनको तयारी
admin October 31, 2021 अन्तराष्ट्रिय, स्वास्थ्य 0
एजेन्सी । कोभिड महामारीका कारण अहिलेसम्म विश्वमा ५० लाख जनाको मृत्यु भइसकेको छ । महामारीकै कारण संसारभर २४ करोड जना जना संक्रमित छन् । त्यस्तै, कोभिडले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित छ । महामारीका कारण प्राय देशको अर्थतन्त्र चौपट परेको छ । तर, संसारमा एउटा मात्र देश छ जहाँ पहिलो पटक